ယ္ခု သီတင်းပတ်အတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့် မှတ်သားဖွယ်သတင်းများ (၁၄.၆.၂၀၁၁- ၂၁.၆.၂၀၁၁), interesting news (14.6.2011-21.6.2011) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ယ္ခု သီတင်းပတ်အတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့် မှတ်သားဖွယ်သတင်းများ (၁၄.၆.၂၀၁၁- ၂၁.၆.၂၀၁၁), interesting news (14.6.2011-21.6.2011)
ယ္ခု သီတင်းပတ်အတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့် မှတ်သားဖွယ်သတင်းများ (၁၄.၆.၂၀၁၁- ၂၁.၆.၂၀၁၁), interesting news (14.6.2011-21.6.2011)
Posted by eros on Jun 14, 2011 in Myanma News, News | 19 comments
ယ္ခု သီတင်းပတ်အတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့် မှတ်သားဖွယ်သတင်းများ
ဘဏ်အားလုံး အသုံးပြုနိုင်မည့် ကတ်စနစ် ပေါ်ပေါက်ဖွယ်
မြန်မာနိုင်ငံမှ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များ၊ အစိုးရဘဏ်များ စုပေါင်း ပါဝင်မည့် MPU (Myanmar Payment Union) ခေါ်သည့် ငွေပေးချေမှု စနစ်တစ်ရပ်ကို ဗဟိုဘဏ်နှင့် ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များ စုပေါင်းကာ ပထမဆုံးအကြိမ် လုပ်ဆောင်မည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ် (နေပြည်တော်ရုံး) မှ အကြီးတန်း တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက အတည်ပြု ပြောကြားကြောင်းယင်းစနစ်မှာ အချက်အလက်များကို ဗဟိုစုစည်းစနစ် တစ်ခု ထူထောင်ကာ ဘဏ်တစ်ခုနှင့် တစ်ခုကြား အွန်လိုင်းဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသဖြင့် ဘဏ်တစ်ခု၏ ကတ်နှင့် အခြားဘဏ် တစ်ခုတွင် ငွေထုတ်နိုင်မည့် စနစ်ဖြစ်ကြောင်း ဧရာဝတီ ဘဏ်မှ အထွေထွေ မန်နေဂျာက ရှင်းပြကြောင်းသတင်းကို The Voice Weekly သတင်းဆိုက်တွင်ဖော်ပြသွားသည်။
စီးပွားရေးဆိုင်ရာ လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုကို တားဆီးနိုင်ရန် ယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေစတင် ရေးဆွဲနေ
စီးပွားရေး နယ်ပယ်အသီးသီး ရှိ လက်ဝါးကြီးအုပ် အမြတ်ထုတ်မှုများကို တားဆီးနိုင်ရန် ယှဉ်ပြိုင်မှု ဆိုင်ရာဥပဒေကို စတင်ရေးဆွဲနေပြီး လာမည့်နှစ်နှစ်အတွင်း ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရန် ပြင်ဆင်လျက်ရှိကြောင်း ပါဝင်ရေး ဆွဲနေသည့် ပညာရှင်များ အသိုင်းအ၀ိုင်းထံမှ သတင်းရရှိပါကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံတွင် လွတ်လပ်သော ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကို ကျင့်သုံးမည်ဟု ဦးတည်ချက်ထားရှိပြီး ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သော ဥပဒေများနှင့် အသစ်ပြဋ္ဌာန်းရန် လိုအပ်သော ဥပဒေများကို ပြင်ဆင်ရေးဆွဲနေပြီ ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အများစုမှာ အသေးစားနှင့် အလတ်စား လုပ်ငန်းများသာဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်း ရှိ အခြားနယ်ပယ်စုံ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကြီးများနှင့် ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူများ၏စီးပွားရေး လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုနှင့် ဈေးကစား အမြတ်ထုတ်မှုကို တားဆီးကာကွယ်နိုင်ရန်၊ လုပ်ငန်း အားလုံး ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သော ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ရပ်ဖြစ်ရန်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ယှဉ်ပြိုင်လုပ်ကိုင်မှုမှတစ်ဆင့် စားသုံးသူများ ရွေးချယ်နိုင်စွမ်း မြင့်တက်စေရန် ယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့် မူဝါဒများချမှတ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာဥပဒေကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများအပြားတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာ စစ်မတိုင်မီက အမေရိကန်၊ ကနေဒါ နှင့် သြစတြေးလျတို့တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်းတွင် ဥ ရောပနိုင်ငံများ၊ အခြားဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသည်။ အာရှနိုင်ငံများအနေ ဖြင့် ၁၉၈၀ ကျော်နှင့် ၁၉၉၀ ကျော် နှစ်များတွင် အများအပြား ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာမှလွဲ၍ ကျန်အာဆီယံ နိုင်ငံအားလုံးတွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းကို Eleven Media Group သတင်းဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း၂၀၀ ၀န်းကျင် ကုန်ကျမည့် မြန်မာနိုင်ငံပိုင် ဂြိုဟ်တုတစ်လုံးကို ရုရှား၊ တရုတ်၊ ဂျပန်ပိုင်ဂြိုဟ်တု ကုမ္ပဏီများနှင့် ပူးပေါင်းလွှတ်တင် သွားရန်ရှိ
အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၀၀ ၀န်းကျင်ကုန်ကျမည့် မြန်မာနိုင်ငံပိုင် ဂြိုဟ်တုတစ်လုံးကို ရုရှား၊ တရုတ်၊ ဂျပန်ပိုင်ဂြိုဟ်တု ကုမ္ပဏီများနှင့် ပူးပေါင်းလွှတ်တင်သွားရန် ရှိကြောင်း ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်း ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဒုတိယ ၀န်ကြီး ဦးတင့်လွင်က ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသည့် မိုဘိုင်း ဆက်သွယ်မှု ကွန်ရက်စနစ် တည်ဆောက်ရေးနှင့်တပ်ဆင်ရေး အခြေခံသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂/၂၀၁၁) နှင့် အခြေခံ ပစ္စည်းထိန်းသင်တန်း (၀၁/၁၁-၁၂) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြောကြားခဲ့ကြောင်းသတင်းကို Eleven Media Group သတင်းဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ တရားစွဲဆိုခံရသော အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာမြတ်ဥာဏစိုး အနိုင်ရရှိ
ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ တရားစွဲဆိုခံရသော အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာမြတ်ဥာဏစိုးသည် ၎င်းစွပ်စွဲခံရသော ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှု၌ အနိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ထို့ပြင် တစ်ဖက်မှလျှောက်ထား တိုင်ကြားသူအား မဟုတ်မမှန် စွပ်စွဲသည့်အတွက် ဒေါက်တာမြတ်ဥာဏစိုး အား ငွေကျပ် ငါးသိန်း ပေးလျော်စေရန် အမိန့်ချမှတ် ခဲ့ကြောင်းလည်း ဒေါက်တာမြတ်ဥာဏစိုးက ပြောကြားခဲ့သည်။ဒေါက်တာမြတ်ဥာဏစိုးအား လျှောက်ထားတိုင်ကြားခဲ့သူမှာ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီမှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးမြတ်သူ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကို Eleven Media Group သတင်းဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
၀န်ကြီးဌာနအချို့ရှိ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ကိစ္စရပ်များ တိုက်ဖျက်နိုင်ရေးအတွက် ဌာနတွင်းအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း၍ စုံစမ်းဖော်ထုတ်နေ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော်၏၀န်ကြီးဌာနအချို့တွင် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ကိစ္စရပ်များကို တိုက်ဖျက်နိုင်ရေးအတွက် ဌာနတွင်း အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း၍ စုံစမ်းဖော်ထုတ်နေကြောင်း ၀န်ကြီးဌာနအချို့ထံမှ သတင်းရရှိ ကြောင်းသတင်းကို Eleven Media Group သတင်းဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ အာဆီယံစံဖြင့် ကုန်ပို့သည့်စနစ် ပျက်ပြယ်
ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေး အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ အဝေးပြေး လမ်းမကြီးများတွင် ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့က စတင်ကျင့်သုံး ခဲ့သော အာဆီယံစံဖြင့် သတ်မှတ်၍ ကုန်သယ်ယူ ပို့ဆောင်သည့် စနစ်သည် ဇွန်လဆန်းပိုင်းတွင် ပျက်ပြယ်သကဲ့သို့ ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဘုရင့်နောင် ခရေလမ်းရှိ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက The Voice Weeklyသို့ ပြောကြားကြောင်း၊ ယခုအခါ ဂိတ်ပေါင်း ၁၈၀ နီးပါး ရှိသော ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေး ကုန်စည် ပို့ဆောင်ရေး ဂိတ်များ အားလုံးလိုလိုသည် အာဆီယံစံဖြင့် မသတ်မှတ်ခင် အချိန်က တန်ချိန်များအတိုင်း ပြန်လည် ကျင့်သုံးနေကြကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက် ပြောကြားကြောင်း ယခုအခါ ယင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အစိုးရဘက်က တစ်စုံတစ်ရာ အရေးယူမှုများ မရှိတော့ကြောင်းနှင့် အာဆီယံစံဖြင့် ကုန်တင်ဆောင်ရန် လို၊ မလို တရားဝင် သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ချက် တစ်ရပ်ကို ယာဉ်ပိုင်ရှင်များဘက်က သိရှိလိုနေကြကြောင်း ၁၀ ဘီးတပ်ယာဉ် ပိုင်ရှင်တစ်ဦးက ပြောကြားကြောင်း ယခုအခါ အာဆီယံစံဖြင့် သတ်မှတ်၍ ကုန်သယ်ယူပို့ဆောင်သည့် စနစ်သည် ပျက်ပြယ်လာသည့် မေလအတွင်းမှ စတင်၍ ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးတစ်ပိဿာ လျှင် ၁၄၀ ကျပ်ထိ မြင့်တက်ခဲ့သော ကုန်စည် ပို့ဆောင်ခများမှာ မေလအတွင်းမှ စတင်၍ ထက်ဝက်ခန့် ၇၀ ကျပ်ခန့်အထိ ကျဆင်းလာလျက် ရှိကြောင်းလည်း ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံ ရိုးကြီးချောင်းလမ်းမှ ကုန်သည်ကြီး တစ်ဦးက ပြောကြားကြောင်း သို့ရာတွင် ရန်ကုန်မြို့တော်ရှိ ကုန်စည်ဈေးနှုန်း အများစုမှာ သိသိသာသာ ကျဆင်းလာခြင်း မရှိသေးဟု ရန်ကုန်မြို့ ဒဂုံမြို့နယ် မြောက်ပိုင်းတွင် နေထိုင်သူ အသက် ၅ဝ ကျော်အရွယ် အိမ်ရှင်မ တစ်ဦးက ပြောကြားကြောင်း သတင်းကို The Voice Weekly သတင်းဆိုက်တွင်ဖော်ပြသွားသည်။
ရတနာပုံတိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်၌ တိရစ္ဆာန်စာ ဈေးများဟုဆို
ရတနာပုံ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ် ရတနာပုံတွင် တိရစ္ဆာန်များအားကျွေးရန် ရောင်းချ သော အစားအစာများမှာ ရှိသင့်သည့် ဈေးထက် သိသိသာ သာပင် ပိုများနေသဖြင့် သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော ဈေးကို ယူစေ ချင်သည်ဟု ဥယျာဉ်သို့ လည်ပတ်ကြသူများက ပြောကြောင်းသတင်းကို မြန်မာတိုင်းမ် မြန်မာဘာသာ သတင်းဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
၂၀၁၅ တွင် မူလတန်းကျောင်းများကို အလယ်တန်းအဆင့် တိုးမြှင့်မည်
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် မူလတန်း ကျောင်းများကို အလယ်တန်း အဆင့်သို့ ရောက်ရှိအောင် တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး၏ ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဦးစိုးမြင့်က ၄-၆-၂၀၁၁ ရက်တွင် ပြောကြားကြောင်း ပြည်မြန်မာဂျာနယ်မှ သတင်းကို ရတနာပုံ သတင်းဆိုက်တွင် တင်ဆက်ထားပါသည်။
ပျံကျဈေးသည်များ သီးသန့်နေရာများထက် လက်ရှိရောင်းချနေသည့်နေရာများ၌သာ ဆက်လက်ရောင်းချလို
လမ်းဘေးပျံကျဈေးသည်များ သီးသန့်နေရာများတွင် ပြောင်းရွှေ့ ဖွင့်လှစ်စေခြင်းထက် လက်ရှိရောင်းချ နေသည့်နေရာများ၌သာ ဆက်လက် ရောင်းချခွင့်ပြုရန်လိုလားကြောင်း ပျံကျ ဈေးသည်များက တညီတညွတ်တည်း ဆိုသည်။
ယင်းသို့ဆန္ဒရှိခြင်းမှာ သီးသန့်နေ ရာများတွင်ရောင်းချရမည်ဆိုပါက စား သုံးသူများအနေဖြင့် တကူးတကလာ ရောက်စားသုံးကြမည်မဟုတ်ကြောင်း၊ ယင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ရမည်ဆိုပါက ဆိုင် ခန်းခစရိတ်များမတတ်နိုင်ခြင်း၊ သွား ရေးလာရေးနှင့် သယ်ယူစရိတ်များပိုမို များပြားလာနိုင်သည့်အတွက်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လမ်းဘေးပျံကျဈေးသည်များအ နေဖြင့် လက်ရှိရောင်းချလျက်ရှိသည့် နေရာ၌ပင် ညနေ ၄နာရီမှ ည ၉နာရီ အထိ ရောင်းချခွင့်ပြုပါရန် စည်ပင်မှ ဈေးကောက် ကောက်ခံပါကလည်း ပေးဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် သန့်ရှင်းရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် စည် ပင်မှချမှတ်ထားသောစည်းကမ်းများကို အပြည့်အ၀လိုက်နာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လမ်းသွားလမ်းလာများအတွက်အနှောင့် အယှက်မဖြစ်စေရန်စည်ပင်မှချမှတ် ပေးသည့် စည်းကမ်းအတိုင်းသတ်မှတ် ထားသောနေရာများတွင် ရောင်းချသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စည်းကမ်းမလိုက်နာ ပါက တိတိကျကျအရေးယူဆောင်ရွက် ပေးရန်လိုလားကြောင်းဈေးသည်များ ကဆိုကြကြောင်း သတင်းကို Yangon Media Group သတင်းဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ဒီတပတ် ကွန်နက်ရှင်မကောင်းလို့ များများစားစား မတင်နိုင်တဲ့ အတွက် အားနာမိပါတယ်။ အလုပ်များတာလဲ တကြောင်းပေါ့။ နောက်များမှာ ဖြည့်စရာရှိတာ ဖြည့်ပေးပါမယ်။
ကျေးဇူးပါ ကျနော် ပန်းတွေနဲ့ဝေ သီချင်းတော်တော်ကြိုက်တယ်
တန်ဖိုးရှိတဲ့ သတင်းတွေ ရေးပေးတဲ့ eros ရေ- အထူးကျေးဇူး တင်ပါတယ်။ တတ်နိုင်ရင် ကိုယ်ရမယ့် ပွိုင့်တွေတောင် ပေးချင်ပါတယ်။ (ပေးမရမှန်း သိလို့ ပြောတာ)။ ကြုံတုန်း ပြောရဦးမယ်။ eros ပြောတဲ့ eros အကြောင်းမှာ CV ပို့လိုက်ရင် အလုပ်ပေးမလားဗျိုး ဆိုတာ- အလုပ်ပေးချင်ပါသော်လည်း နာမည် မခေါ်တတ်ပါသောကြောင့် လက်လျှော့လိုက်ပါသည်လို့။ နောက်ပြီး အလှနတ်ဘုရားအစား အလုပ်နတ်ဘုရားဆိုရင် ကိုးကွယ်တဲ့လူ ပိုများပြီး လာဘ်ရွှင်မလားလို့ ပြောင်းလဲကြည့်ပါလား။ :D
ပြည်တွင်းစစ်အန္တရာယ် KIO သတိပေး
၁၆ နှစ်တာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲခဲ့ကြတဲ့ ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIO) နဲ့ မြန်မာအစိုးရတပ်တို့ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်ဖြစ်နေပြီး ပြည်တွင်းစစ်ကြီး ဖြစ်သွားတဲ့အထိ ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ KIO က ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရ တပ်တွေဘက်က KIO ဌာနချုပ်နားမှာ တပ်တွေချထားတာကို ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့တာကို နောက်မဆုတ်တဲ့အပြင် လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ စပြီး ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့် ပြည်တွင်းစစ် အခြေအနေမျိုးထိ တိုက်ပွဲက ပြင်းထန်လာနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဗွီအိုအေ ထိုင်းအခြေစိုက် သတင်းထောက် နူးပန်က စုစည်းတင်ဆက်ထားပါတယ်။
ရန်ကုန်တွင် ကချင် ကျောင်းသားများ နေခွင့်မပေးတော့
ရန်ကုန်မြို့တွင် ကျောင်းတက်ရန် ရောက်လာသော ကချင်တိုင်းရင်းသား လူငယ်များကို သန်လျင်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးရုံးက နေထိုင်ခွင့်မပေးတော့ဘဲ ချက်ချင်းပြောင်းရန်နှင့် မပြောင်းပါက ဖမ်းဆီးမည်ဟု ဖိအားပေးနေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အဆိုပါ လူငယ်များသည် ရန်ကုန်မြို့တွင် ကျောင်းတက်ရန်အတွက် ဇွန်လဆန်းပိုင်းက ရောက်လာပြီး သန်လျင်မြို့အေး သာယာရပ်ကွက် ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရွာရှိ ကချင်အမျိုးသားတဦး ပိုင်သောအိမ်တွင် တည်းခိုနေထိုင်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။
လမ်းဘေးဈေးသည်တွေဟာလည်း မိမိတို့စားဝတ်နေရေးအတွက် သမ္မာအာဇီဝ လုပ်စားနေတာလို့မြင်ပါတယ်။ လမ်းမပိတ်အောင် ချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းနဲ့အညီ ရောင်းမယ်ဆိုရင် ထိုက်သင့်တဲ့အခွန်ကောက်ပြီး ခွင့်ပေးသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်ရောင်းတဲ့နေရာသန့်ရှင်းရေးကိုလည်း လုပ်ခိုင်းပြီး အမှိုက်တွေကိုပြစ်ဘို့ အမှိုက်ပုံးတွေပါထားပေးဘို့ လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ ၂လုံး ၃လုံးတွေပါမထိုးဘို့ ပညာပေးသင့်ပါတယ်။
လမ်းဘေးဈေးသည်တွေများပြားလာခြင်းဟာ စီးပွားရေးအဆင်မပြေသူတွေများ လာခြင်းလို့မြင်ပါတယ်။ အပျော်လမ်းဘေးမှာဈေးလာရောင်းသူတွေမရှိပါ။ဒါတွေကိုမလုပ်ရဆိုပြီးနှိမ်နှင်းရင် ၀င်ငွေမရှိတဲ့သူတွေဟာ ထွက်ပေါက်ရှာရင်း နောင်တချိန်မှာ ရာဇ၀တ်မှုတွေထူပြောလာစေနိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
မျက်နှာမှာ သနပ်ခါးရှိဘို့ထက် ဗိုက်ဝဘို့ကပိုအရေးကြီးပါတယ်။
လူတွေရဲ့မှတ်ညဏ်ကို ထိန်းချုပ်(အဖွင့်အပိတ်)လုပ်နိုင် တော့မည်..။
An On-Off Switch for Memory?
For the first time, scientists have recreated the brain’s learning process and can restore long-forgotten memories.
Fri Jun 17, 2011 01:00 PM ET Content provided by AFP
Scientists have developed an on-off switch in memory.
Using this brain prosthesis, they have helped rats retrieve long-forgotten memories.
The treatment could one day help people who suffer from memory loss due to dementia, stroke or brain injury.
U.S. scientists said Friday they have developed an on-off memory switch that helped laboratory rats rememberabehavior that they had forgotten.
The brain prosthesis marks the first time that researchers have been able to duplicate the brain’s learning process, restoring memories that test rats were drugged to forget, and could offer hope for people with dementia.
သူကြီး ရေ အရပ်စကားကြား ရတာလေး ပြောပြမယ် ဗျာ ။ ရန်ကုန် MMA က လျှပ်တစ်ပြက် ဂျာနယ် ကို ပြန်လည် တောင်းပန် ဖို့ စာပို့ ထားတယ် တဲ့ ။ အဲဒါ ကို လျှပ်တစ်ပြက် ဂျာနယ် က ဆောင်းပါးရှင်(သို့ ) သတင်း ရေးသူ ကို သူတို့ မသိပါဘူး ဆိုပြီး ဝေ့လည်ကြောင်ပတ် လုပ်နေတယ် တဲ့ ။ အဲဒါ ဟုတ်သလား သိချင်လို့ ပါ ။ ဇတ်တငံ့ငံ့ ဖြစ်နေလို့ ပါ ။ နောက်ဆက်တွဲ သတင်းလေး များ ကို တင်ပေးပါဦး လို့ တောင်းဆိုပါရစေ ဗျာ ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နော် .
အစိုးရသစ် အခွန် တင်းကျပ်တော့မည်
အစိုးရသစ်လက်ထက် ပြောင်းလဲလိုက်သည့် အခွန်ဥပဒေသစ်ကြောင့် လာမည့် ဇူလိုင်လမှ စတင်၍ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း ရရှိခဲ့သော ၀င်ငွေအပေါ် အခွန်ပေးဆောင် ရမည်ဖြစ်ရာ ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ ငွေကြေးကျပ်တည်းမှု ကြုံတွေ့လာနိုင်ကြောင်း လေ့လာသူများနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များက ပြောသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေအရ အမြတ်ခွန်ဥပဒေသည် ပျက်ပြယ်သွားသည်။ ထို့ကြောင့် ယခင် “အမြတ်ခွန် ဥပဒေ” ဖြင့် ပေးဆောင်နေရသည့် အခွန်ထမ်းများကို “၀င်ငွေခွန် ဥပဒေ” ဖြင့် ယခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ စတင်ကာ ပြောင်းလဲ ကောက်ခံရန် ပြည်တွင်း အခွန်များ ဦးစီးဌာနက ယခုလအတွင်း တရားဝင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
ယခင်က အမြတ်ခွန် ဥပဒေ၊ ၀င်ငွေခွန် ဥပဒေ ဟူ၍ ၂ မျိုးရှိရာ၊ တဦးပိုင်ကုမ္ပဏီနှင့် တဦးတည်း လုပ်ငန်းရှင်များသည် အမြတ်ခွန် ဥပဒေဖြင့် ပေးဆောင်ရပြီး၊ ကုမ္ပဏီ၊ သမ၀ါယမအသင်း၊ နိုင်ငံပိုင်စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းများသည် ၀င်ငွေခွန် ဥပဒေဖြင့် ပေးဆောင်ရသည်။
ယခင်အမြတ်ခွန် ဥပဒေဖြင့် တဦးတည်းပိုင် ကုမ္ပဏီများကို ကောက်ခံစဉ်က တနှစ်လျှင် ကျပ် ၅၀၀၀ မှ ကျပ် ၁၀၀၀၀ ကြား ၀င်ငွေရှိသူသည် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ကျပ် ၁၀၀၀၀ နှင့် ကျပ် ၂၀၀၀၀ ကြား ၀င်ငွေ ရှိသူသည် ၁၁ ရာခိုင်နှုန်း၊ ကျပ် ၂ သိန်း နှင့် ၃ သိန်းကြား ၀င်ငွေရှိသူသည် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ကျပ် သိန်း ၂၀ နှင့် ၄၀ ကြား ၀င်ငွေရှိသူသည် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းစသဖြင့်ပေးဆောင်ရ သည်။
သတင်းအကျယ်သို့ – http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/news/6631-2011-06-17-10-05-55
အခွန်တွေကို ၁၀% နဲ့သာ တရားဝင်ကောက်ရင် ကျနော်တို့အားလုံး လိမ်စရာမလိုတော့ဘူး၊ ၄၀% ဆိုတော့ မလိမ်ချင်ပဲ လိမ်နေရတယ်။ စင်္ကာပူမှာ အခွန်တွေက ၁၀%-၁၅% လောက်ပဲ ရှိတယ်ကြားတယ်။ ၁၀% ကောက်ရင် နိုင်ငံတော်က ခုထက်မနဲတဲ့ အခွန်တွေ ရနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခွန်မှုးနဲ့ အခွန်ရုံးကိုတော့ ပေးနေရဦးမှာပဲမဟုတ်လား။
မပေးရင် သူတို့က ဒုက္ခပေးမှာပါပဲ။
အခုလဲနိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပဒေက ဘယ်လိုဆိုထားထား တကယ်တမ်းတော့ ညှိနှိုင်းပြီးတော့ပဲ ဆောင်နေရတာပါ။
တချို့လုပ်ငန်းတွေဆို ဥပဒေနဲ့ညီအောင် အခွန်ဆောင်ချင်ပေမယ့် အခွန်ရုံးက (ကြက်အဖြစ်နဲ့) ၀ှက်ထားပြီး ဒီအတိုင်းဆက်ကြေး တောင်းနေတာတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။
သတင်းပေးတဲ့ meelay ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခွန်တွေက တကယ်သာ ၁၀% တရားဝင် ဖြစ်သွားရင် မေတ္တာကြေး လောက်ပဲ ပေးဖို့လိုတော့တယ်။
အခုက ၄၀% သတ်မှတ်ထားတော့ မပေးမဖြစ် ပေးနေရတာပေါ့။ သူတို့လည်း တကယ်ဆို သိလျှက်နဲ့ မျက်စိတဖက်မှိတ်ပေးထားတယ်လို့ထင်တယ်။ တကယ်သာ ၄၀% ကို ထိထိရောက်ရောက်ကောက်ရင် အခွန်ထမ်းတွေကလည်း သူတို့လုပ်ငန်းမှာ ၅၀% လောက်ထပ်ပြီး အမြတ်တင်လာကြလိမ့်မယ်။ ၄၀% ကနေ ၁၀% လျှော့လိုက်ရင် အခုရတဲ့အခွန်ရဲ့ ၄ပုံ၁ပုံ လောက်ပဲ ရတော့မယ်လို့တွက်ပုံရတယ်။ ကျနော့် အမြင်ကတော့ ၁၀%-၁၅% တရားဝင်ကောက်ရင် အခုရမဲ့ အခွန်ထက် မနဲနိုင်ပါဘူး။ အခွန်ရှောင်ချင်တဲ့သူတွေကတော့ ရှောင်နေဦးမှာပဲ။ ကျနော်ကတော့ အဲဒီနှုန်းဆိုရင် တရားဝင်ဆောင်ချင်ပါတယ်။
ဒိမိုကရေစီနိုင်ငံဆိုတာအခွန်နဲ.အသက်ဆက်ရတဲ့တိုင်းပြည်ပါ..အခွန်တော့ကောက်ပြီး ဒုံရင်း ဒုံရင်းပဲဆိုရင်
၀န်ကြီးဌါနများ လာဘ်စားမှု စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ တွေ ဖွဲ့ပြီး ဆောင်ရွက်နေပြီ ကြားရတာ မင်္ဂလာပါ။ လောလောဆယ်တော့ အောက်ခြေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေ ခံရမယ် ထင်ပါတယ်။
ဒီနည်းဟာ ရေရှည်မှာ အမှန်တကယ် အမြစ်ပြတ်နိုင်မယ့် ဖြေရှင်းနည်းတခုလို့မမြင်ပါ။ အကိုင်းတွေချိုင် ပင်စည်တွေခုတ်သလို ယာယီတော့ ငြိမ်သွားမှာပါ။
BURMA RELATED NEWS – JUNE 18, 2011
AP – Myanmar blames Kachin rebels for fighting
Reuters – Chinese workers flee Myanmar fighting: report
ANI – India to reach out to Aung San Suu Kyi during Krishna’s Myanmar visit
Bernama – 22 illegal immigrants from Myanmar arrested
Xinhua – Myanmar reiterates it opens door of peace to dissidents
Financial Express Bangladesh – Trade with Myanmar yet to reach expected level
Times of India – MHA asks Mizoram to stop influx from Myanmar
San Jose Mercury News – World Refugee Day event in Oakland raises awareness
TrustLaw – Trafficking: More Chinese men buying “cheap” brides from Myanmar
Livemint – Fresh attempt to revive two Myanmar hydel projects
eTaiwan News – Myanmar blames ethnic rebels for blast that hurt 3
opednews.com – ASEAN urges for urgent peace dialogue in Burma
Mizzima News – Suu Kyi sends birthday message to India
ကချင် တိုင်းရင်းသား စစ်ပြေးဒုက္ကသည် မြေဇာပင် တွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲ သတင်း ရှိရင် တင်ပေးပါအုန်း ။ ကချင်လျွှတ်တော်အမတ် ကဒီအရေးအခင်း နဲ့ပါတ်သက်လို့ ဘာတွေလုပ်နေသလဲ သိချင်သား ။
19.6.11 ည ၇နာရီလောက်မှာ တောင်ဥက္ကလာ အပိုင်း ၄ လောက်မှာ မီးလောင်ခဲ့ပါတယ် အိမ် ၄လုံး ပါသွားတယ် ပြောတယ်။ မီးသတ်ကား ၁၇စီး နဲ့ ငြိမ်းသွားတယ်လို့ ကြားပါ၏
ယနေ့ မနက်ပိုင်းမှာလည်း အပိုင်း ၄ မှာ မီးလောင်တယ်လို့ ထပ်ကြားပါတယ်။
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းတော့ မသိရသေးပါ။
ရပ်ကွပ်နေ လူများ ပြောကြားချက် အရကတော့ ဟိုတလောကလည်း မီးကွင်းနဲ့ လူတယောက် ပြစ်သွားတာ ချက်ချင်းသိလို့ မီးမလောင် လိုက်ပေမဲ့ မီးကွင်းပြစ်တဲ့ လူကို လိုက်ဖမ်းတာ မမိလိုက်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
20.6.2011 နေ့ လည် 12:45 အချိန် ခန့် မန်းတလေး မြို့ စံပြ လမ်းဆုံ အနီးမှာ မီးလောင်ခဲ့ပါတယ် ။ ၂၅ မိနစ်အတွင်း မီးကို ငြိမ်းသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ် ။ ယခု လ အတွင်း နေ့ တိုင်းလိုလို မီးလောင် သော သတင်းများကို ကြားရှိနေရတာ ကို အံ့သြနေကြပါကြောင်း ။